Booba Gims နှင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်! - Teles Relay
Booba Gims နှင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်!
By Tele RELAY တစ်ခု On စက်တင်ဘာ 13, 2020
Rapper Booba သည်ပြင်သစ်အဆိုတော်များဖြစ်သော La Fouine, Kaaris နှင့် Gims တို့နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးကိုအဆင်ပြေစေရန်ရုန်းကန်နေရသည်။
မကြာသေးမီက Duke of Boulogne အမည်ရှိသူသည် Instagram ကိုကြေငြာမည်ဆိုပါက Kaaris ၏အယ်လ်ဘမ် ၂.၇.၀ အသစ်ထွက်ရှိလာသည့်အခါတွင်သူသည်ပြင်သစ်ရက်ပ်အားလာမည့် single တစ်ခုဖြင့်အမိန့်ကိုပြန်လည်ရယူလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ '' တခြားရက်ပ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့အခြားတိုက်ပွဲတွေကိုမမေ့ပါနဲ့။
စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တနင်္လာနေ့တွင် Booba သည် Instagram မှပုံပြင်များနှင့် Gims အား Gims အားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
Kais ၏အယ်လ်ဘမ်တွင်ရှိနေပြီး Last Metro ပေါ်ရှိ Kendji Girak နှင့်အတူ Gims သည်အီဂျစ်ရက်ပါ (နှင့်သရုပ်ဆောင်) မိုဟာမက်ရမာဒန် - Ya Habibi နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားသို့ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည်။
ဒီတစ်ခုတည်းနှင့်၎င်း၏ဂီတဗီဒီယိုကိုစတင်ရန် Gims သည်နယူးယောက်ရှိ Times Square ရှိ illuminated sign များတွင်ပြသောအီဂျစ်အနုပညာရှင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ IG ဇာတ်လမ်းတွင် Gims မှတင်ပြသောသတင်းအချက်အလက်များအရအဆိုပါတေးသီချင်းကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံအတော်များများတွင်နံပါတ် ၁ အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
မှတ်ချက်တစ်ခုတွင်ခါးသီးစွာတုံ့ပြန်ရန်ဘိုဘိုအားမည်သည့်အချက်ကပေးသနည်း။မင်းကသာကန္တာရထဲမှာနံပါတ်တစ်နေရာပဲ ဆိတ်သားညစ်ပတ်၏သား” သူကပြောပါတယ်။
သူမတိုင်မီက Sexion d'Assaut မှ Masterclass ၏ Masterclass ကိုကြေငြာနေစဉ်သူ၏ဇနီး DemDem ကိုသူမနေ့စဉ်ဘ ၀ များကိုအမြဲတမ်းပြသထားသောကွန်ရက်များ၌တွေ့ရစဉ်မှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် Gims သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
တော်တော်လေးလည်ချောင်းနာတဲ့သတင်းစကား "@Gims fuck ဆိုတဲ့ မင်းသေပြီ @demdem ကို Omar Piguet မဝယ်ဘဲချက်ပြုတ်ရန်ပြောပါ၊ သင်သည်ညစ်ပတ်ပေရေနေသောကြောင်အစာနှင့်တူသည် ! "
ဤဆောင်းပါးသည် http://www.culturebene.com/62649-booba-clashe-violemment-gims.html တွင်ပထမအကြိမ်ဖြစ်သည်။
DJ ARAFAT ARIEL သေဆုံးမှုနောက်ဆုံးတော့စကားပြော !!! - ဗီဒီယို